အထူးစီးပွားရေးဇုန်ဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးဆွဲ | ဧရာဝတီ
မေစစ်ပိုင် / ဇွဲထက်| January 17, 2013 | Hits:60,934
2 | | ဇန်နဝါရီလ ၉ ရက်နေ့က ဆွေးနွေးပွဲတွင် ရှင်းလင်း ပြောကြားနေသော သီလ၀ါ အထူး စီးပွားရေးဇုန် ဖော်ဆောင်ရေး ကော်မတီ ဥက္ကဌ ဦးဆက်အောင် (ဓာတ်ပုံ – ဇွဲထက်/ဧရာဝတီ)
၂၀၁၁ ဇန်နဝါရီလက အတည်ပြု ပြဌာန်းခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံ အထူးစီးပွားရေးဇုန် ဥပဒေ (The Union of Myanmar Special Economic Zone Law) ကို အသစ်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲပြီး လွှတ်တော်တွင် တင်ပြသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်မှုဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးဆက်အောင်က ပြောသည်။
“လက်ရှိအခြေအနေတွေနဲ့ ကိုက်ညီအောင်လို့ SEZ (Special Economic Zone) Law ကို အသစ်ပြင်ပြီးတော့ နိုင်ငံတကာ စံညွှန်းမီအောင် ဆွဲထားတယ်။ ပြန်ပြင်တာထက် အသစ်အတိုင်း ရေးဆွဲထားတာပါ။ ဥပဒေပြင်ဆင်ချက်အသစ်ကို လွှတ်တော်မှာ တင်ပြမယ်” ဟု ဒု ဝန်ကြီး ဦးဆက်အောင်က ဆိုသည်။
အဆိုပါ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသည့် အထူးစီးပွားရေးဇုန် ဥပဒေတွင် ဇုန်များ၌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပြုလုပ်ရာတွင် ပြည်တွင်း ပြည်ပ လုပ်ငန်းရှင်များဟု မခွဲခြားဘဲ တပြေးညီ ဆောင်ရွက်ခွင့် ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အထူးဇုန်တခု ဖော်ထုတ်တိုင်း ဥပဒေတခု ပြဌာန်းခြင်း မဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်၊ အသေးစားနှင့် အလတ်စား လုပ်ငန်းဈေးကွက်၊ စက်မှုလုပ်ငန်း၊ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ ပေါ်ထွက်လာနိုင်ရန် အတွက်လည်း နိုင်ငံတကာရှိ အထူးစီးပွားရေးဇုန် ဥပဒေများကို လေ့လာ၍ ရေးဆွဲထားသည်ဟု ဒု ဝန်ကြီး ဦးဆက်အောင်က ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ် ဒု ဥက္ကဌ ဦးမောင်မောင်လေးက “ဥပဒေဆိုတာက တသမတ်တည်းတော့ မသွားဘူး။ အမြဲတော့ ပြင်ဆင်နေရမှာပါပဲ။ ပြည်တွင်းပြည်ပ လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်တော့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ လာနိုင်မယ်လို့တော့ မြင်တယ်။ လူတိုင်းကိုတော့ ကျေနပ်နိုင်အောင်တော့ ဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူး၊ နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွန်းကိုမှီးပြီး အမှားတွေကို ထပ်မမှားအောင်တော့ ပြင်ဆင်ရမှာပေါ့” ဟု ဆိုသည်။
အထူးစီးပွားရေးဇုန် ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ပါက လူထုအကျိုးစီးပွားနှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ၊ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ၊ ရှေးဟောင်း အမွေအနှစ်ဆိုင်ရာ၊ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စသည့် အချက်အလက်များ ပါဝင်သင့်ကြောင်း၊ ပြည်တွင်းပြည်ပ လုပ်ငန်းရှင်များကို တပြေးညီ သတ်မှတ်လုပ်ကိုင်ခွင့် ပေးလိုက်ခြင်းသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက် အခွင့်အလမ်းကောင်း ဖြစ်နိုင်သော်လည်း ယင်းအချက်အလက်များနှင့် မကိုက်ညီဘဲ ရေးဆွဲထားမည်ဆိုပါက အထူးဇုန်အတွင်း ပြဿနာများ ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း စီးပွားရေး ဥပဒေလမ်းညွှန်ပညာရှင် ဦးတင်သန်းဦးက သုံးသပ်သည်။
လက်ရှိပြဌာန်းထားသော အထူးစီးပွားရေးဇုန် ဥပဒေသည် ပြည်တွင်းပြည်ပ လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်များကိုသာ ဦးစားပေးရေးဆွဲထားပြီး လုပ်သားကိစ္စ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းကိစ္စနှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ၊ ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ဦးစားပေး စဉ်းစားထားမှု အားနည်းနေကြောင်း သိရသည်။
ဦးတင်သန်းဦးက “လက်ရှိ အထူးစီးပွားရေးဇုန် ဥပဒေကို သတ်မှတ်ပြဌာန်းတုန်းက သေချာရေးဆွဲမှု မရှိခဲ့တာက ဇုန်တွေမှာ ပြဿနာတွေကို ဖြစ်စေခဲ့တာပဲ။ လူထုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးမှု မရှိနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ အရင်ကဖြစ်ဖူးတဲ့ ပြဿနာမျိုးတွေ ထပ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်” ဟု ဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အထူးစီးပွားရေးဇုန် ဥပဒေ (The Union of Myanmar Special Economic Zone Law) ကို ၂၀၁၁ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလတွင် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီး ယင်းဥပဒတွင် စက်ရုံလည်ပတ်နေစဉ် စမ်းသက်ကာလ ၅နှစ်အတွင်း အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့် ဖြေလျှော့မှုများပါရှိသည်။
၂၀၁၁ ဇန်နဝါရီလတွင် ပြဌာန်းခဲ့သော အထူးစီးပွားရေးဇုန် ဥပဒေအရ သီလဝါ အထူးစီးပွားရေး စက်မှုဇုန်၌ စက်ရုံလည်ပတ်နေစဉ် စမ်းသပ်ကာလ ၅ နှစ်အတွင်း အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့် ဖြေလျှော့မှုများ ပါရှိသဖြင့် ကျန်စက်မှုဇုန်များရှိ စက်ရုံများ ပိတ်ရဖွယ်ရှိကြောင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များက ပြောသည်။
“SEZ ရဲ့ သဘာဝအရ အခွင့်ထူးတွေ ပေးတယ်။ ကျနော်မြင်တယ်၊ SEZ ကသာ အခွင့်အရေးရရင် ကျန်တဲ့စက်မှုဇုန်တွေ အကုန်ပိတ်ပြီး အဲဒီမှာသွားရင်းကြမှာပဲ” ဟု International Business Promotion Center မှ ဘဏ္ဍာရေးမှူး ဦးအေးသောင်းက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
သီလ၀ါ အထူးစီးပွားရေးဇုန်ကို မြန်မာနှင့် ဂျပန် အကျိူးတူ ပူးပေါင်း၍ သန်လျှင်မြို့နယ် သီလ၀ါဆိပ်ကမ်းအနီး မြေဧက ဟက်တာ ၂၄၀၀ ပေါ်တွင် ၂၀၁၅ ခုနှစ်အပြီး တည်ဆောက်သွားမည် ဖြစ်သည်။
တည်ထောင်ပြီး စက်မှုဇုန်များသည် ရေ၊ မီး လုံလောက်စွာ မရရှိခြင်းနှင့် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်များ မရရှိခဲ့သည့်အတွက် လုပ်ငန်းရှင်တချို့ အခက်အခဲများ ရှိကြောင်း သိရသည်။
သို့သော် ဒု ဝန်ကြီး ဦးဆက်အောင်က “”တိုးတက်မှုတခု လုပ်လိုက်တိုင်း၊ လုပ်လိုက်တိုင်းမှာ Complaint ဆိုတာ ရှိလာမှာဘဲ။ အဲဒီ Complaint က အများပြည်သူ အကျိုးတွက်လား လက်တဆုပ်စာရဲ့ အကျိုးတွက်လား ကြည့်ရမယ်။ SEZ အခွင့်အရေး ပိုပေးသလို ရှိသမျှနေရာတိုင်မှာ အဲဒီအခွင့်အရေးပေးပါလို့ တောင်းလို့မရဘူး” ဟု ပြောသည်။
လက်ရှိ စက်မှုဇုန်များသည် အထူးစီးပွားရေးဇုန်ကဲ့သို့ ရှိသင့်သော သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ပြည့်စုံပါက အထူးစီးပွားရေးဇုန်အဖြစ် ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်နိုင်သည် ဆိုသော အချက်ကို လွှတ်တော်တွင် တင်ပြဆွေးနွေးသွားရန် ရှိကြောင်း သိရသည်။
“လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅ နှစ်က လုပ်လာတဲ့အချိန်က ဒီလို ပေါ်လစီ မငြိမ်တာတို့၊ နိုင်ငံတော်က ပြတ်သားတဲ့ မူဝါဒလမ်းစဉ်းတွေ မရှိတာတို့ကြောင့် ၁၅ နှစ်လုံးလုံး မှုန်ဝါ၀ါးပဲဖြစ်တယ်၊ ဦးဆောင်လမ်းပြမှု မရှိခဲ့ဘူး။ နိုင်ငံတကာ အထိအတွေ့၊ အစိုးရရဲ့ အထောက်အပံ့ ဘာမှမရခဲ့ဘူး” ဟု ဒဂုံအရှေ့စက်မှုဇုန်တွင် ပြည်တွင်ကားထုတ်လုပ်ရေး စက်ရုံ တည်ထောင်ထားသူ ဦးမင်းသူက ပြောသည်။
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment Tide January 17, 2013 - 10:55 am	Cosmetic will not build the nation. Political system needs to be laid first, the right kind of democratic foundation. Other than that all the investment can be blown away inaday. Political stability is nowhere to be seen. It is very risky for those who will invest their fortune in shaky Burma. There is no guaranty that the nation will no longer be on fire. The fire from Kachin state can spread throughout the nation. So, lets wait and see what happens.
Reply	​ရော​သ​မ​မွေ February 1, 2013 - 10:11 pm	whataretard you are
Reply	yinkyi January 17, 2013 - 11:26 am	hello